Galkacyo oo lagu soo rogay bandow xilliga habeenkii iyo bileyska oo lagu adkeeyey in ay xiraan ciddii jabisa amarka dawladda. [Akhris …] – Radio Daljir
Galkacyo oo lagu soo rogay bandow xilliga habeenkii iyo bileyska oo lagu adkeeyey in ay xiraan ciddii jabisa amarka dawladda. [Akhris …]
Galkacyo, Aug 08- Warqad qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska m/weyne kuxigeenka Puntland C/samad Cali shire ahna guddoomiyaha guddiga qaran ee nabad-galyada Puntland ayaa lagu caddeeyey in xilliga habeenkii ah bandow adag lagu soo ragay magaalada Galkacyo oo dhawaan lagu dilay wasiirkii warfaafinta alle ha u naxariistee Warsame Cabdi Shirwac.
Shir jaraa?id oo ay si wada jira ah u qabteen guddi heer qaran ah oo uu guddoomiye u yahay m/weyne kuxigeenka Puntland Gen. C/samad Cali Shire iyo guddi heer gobol ah oo isna hadda la magacaabay ayaa lagu faah-faahiyey ujeedada bandowga iyo qodobada uu ka kooban yahay bandowgu oo dhammaantood ah kuwa ku qotoma adkaynta ammaanka iyo sugidda nabad-galyada gobolka.
Wasiirka wasaradda amniga dawladda C/laahi Siciid Samatar, oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay laga bilaabo 8:00 fiidnimo illaa 4:00 AM galinka danbe ee habeenkii in magaalada lagu soo ragay bandow xooggan oo aan cidna ka bixi karin magaalada sidoo kalana soo gali Karin, waxaana bandowgi dhaqan galayaa caawa oo ay taariikhdu tahay 8 bisha August.
Wasiirku waxaa uu sheegay, wixii ka danbeeyey 8:00 fiidnimo in ay mamnuuc ka tahay magaalada Galkacyo wadashada gaadiidka noockasta oo uu yahay, isku socodja dadweynaha, sii furnaashaha meheradaha cuntada iyo kuwa cabitaanka, qaadashada hubka noockasta oo uu yahay, waxaana intaasi sii dheer gaadiidka beersalka leh iyo kuwa taargo la?aanta ah oo iyaga in gaar ah lagu fiirin doono.
Wasiirka oo ay saxaafaddu wax ka weydiisay waxa u qabsoomay dawladda ee ku saabsan dilkii wasiirkii warfaafinta ayaa sheegay wali in lagu raad-joogo raggaasi ayna u xilsaareen guddi gaaar ah kaas oo gacanta kula jira daba-galka soo soo qabashada raggaasi wakhti dhowna la heli doono warbixintooda.
Ciidanka bileyska ee ka shaqeynaya ammaanka ayaa iyana lagu amray in ay xiraan cidkasta oo ku xad-gudubta amarka dawladda iyo bandowga lagu soo rogay magaalada.
Taliye kuxigeen 2-aad ee bileyska Puntland G/sare Cumar Saalax Maxamed, oo isna shirkaasi hadal kooban ka yiri, ayaa bulashada ka codsaday in ay ammaanka kala shaqeeyaan ciidanka bileyska ee ku howl-lan adkaynta nabad-galada gobolka, si looga gudbo marxadda adage e gobolka soo foodsaartay.
Bandowga laga soo rogay magaalada Galkacyo ayaa ka danbeeyey kadib markii 5-tii bishaan gudaha magaalada Galkacyo koox dabley ahi ku toogteen wasiirkii warfaafinta dawladda Puntland Warsame Cabdi Shirwac.
Dhanka kale m/weynaha dawladda Puntland Dr. C/rixmaan Shiikh Maxamed, ayaa wali ku howllan kulamo is daba-joog ah oo uu la yeelanayo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo guddiyada nabad-galyada, waxaana kulamadaas dhammaantood diiradda ku hayaan xal u helidda mashaakilka gobolka Mudug oo wakhtiyo badan ay ka dhaceen falal liddi ku ammaan iyo nabad-galada.